Fa maninona ny saka tsy mahazo mihinana sôkôla? Noti saka
Placeholder sary Laura Torres | | sakafo
Liana be ny saka, ka tsy maintsy jerenao am-bava be ny ao am-bavany. Betsaka ny sakafo manapoizina azy ireo, noho izany zava-dehibe ny hanomezantsika azy ireo izay azo hohanina ihanyraha tsy izany dia mety hanana olana lehibe ianao.
Ny iray amin'ireo fisalasalana matetika matetika ananantsika rehefa miaina amin'ny volony dia ny an'ny maninona ny saka tsy mahazo mihinana sôkôla. Raha te hahafantatra ianao dia tohizo ny famakiana satria anio dia hamaha ilay zava-miafina izahay.
1 Inona ny theobromide ary maninona ny saka no tsy mahazo mihinana sôkôla?
2 Ahoana no ahafantarako raha voapoizin'ny fihinana sôkôla ny saka?
2.1 Inona no ataoko raha mihinana sôkôla ny saka ko?
2.2 Inona no fitsaboana ny fanapoizinana sôkôla?
Inona ny theobromide ary maninona ny saka no tsy mahazo mihinana sôkôla?
Manimba ny saka sy ny alika ny sôkôla.
Ny sôkôla dia misy kafeinina, theobromine ary atiny matavy be. Ny endrika misy poizina indrindra ho an'ny saka dia ny vovoka kakaô sy bara sokola ho fandrahoana sakafo.
Theobromine miaraka amin'ny kafe dia an'ny vondrona simika alkaloid methylxanthines.
La theobromine no singa manapoizina lehibe amin'ny sôkôla sy antony lehibe fanapoizinana amin'ny fihinanana sôkôla amin'ny saka sy alika.
Tsy afaka mihinana sôkôla ny saka anao noho ny halavany ary ny atiny dia henan'ny biby mpihinana henjana. Izany dia mahatonga azy ireo tsy hanana anzima sasany izay manampy amin'ny fametahana fanafody misy poizina, ao anatin'izany ny theobromine. Ka raha avo dia avo ny vola nohanina dia hiangona ao amin'ny ran'ny saka io fitambarana io. Ho fanampin'izany, ny atin'ny tavy avo mety miteraka pancreatitis.
Vokatr'ireny antony ireny, Raha sendra mamo mamo ny saka anao dia ho miadana kokoa noho ny alika ny dingana fanarenana.
Mampidi-doza ny saka sy ny alika ny sôkôla. ny Ny fiankinan-doha amin'izany dia miankina amin'ny fatra, izany hoe, amin'ny tahan'ny sôkôla nohaniny sy ny lanjan'ny saka, ankoatry ny isan-jaton'ny fahadiovan'ny sôkôla. Ny maha sôkôla ronono dia tsy dia misy poizina intsony.
Noho izany, raha mihinana na dia sombin-tsakafo kely aza ny sakaakanao dia mety hampidi-doza ny ainy.
Ahoana no ahafantarako raha voapoizin'ny fihinana sôkôla ny saka?
Samy hafa be ireo soritr'aretina, ka ireto manaraka ireto:
Mitombo ny tosidra.
Fandriana rano tafahoatra
Polydipsia (mila misotro rano betsaka).
Inona no ataoko raha mihinana sôkôla ny saka ko?
Amin'ny tranga tena matotra, izany hoe, amin'ireo izay tena avo lenta ny fihinanana azy dia mety ho faty ao anatin'ny 24 ora fotsiny ilay biby. Ka raha nihinana sôkôla ny sakao, Tena zava-dehibe ny itondranao azy haingana any amin'ny tobim-pahasalamana ho an'ny biby mba tsy hahatratra izany toe-javatra izany.
Voalohany indrindra antsoy ny mpitsabo anao ary lazao aminy fa handeha ho any amin'ny efitrano fitsaboana maika ianao, zava-dehibe ny hamaritanao fa sôkôla nohaniny.
Aza manandrana manao azy mandoa ao an-trano, toy ny amin'ny saka dia sarotra be izany ary mety hiteraka fahasimbana bebe kokoa isika.
Raha manana isika karbaona mihetsika ao an-trano dia afaka manome pilina 5 saka antsika izahay. Ny karbaona mavitrika dia tompon'andraikitra amin'ny fampihenana ny famerenana indray ny theobromine sy ny kafeina, hisorohana ny fitrohana azy ireo tsy ho feno.
Raha tsy manana arina mihetsika ianao ao an-trano dia mety tsara ny manome azy rano na sakafo hampihena ny fitrohana ny vavony ary hampihena ny soritr'aretina.
Raha mieritreritra ianao fa ny saka dia afaka nihinana sôkôla fa tsy azonao antoka izany, dia mamporisika anao aho hijery izany ao anatin'ny 24 ora manaraka mba hahitana soritr'aretina faran'izay haingana.
Inona no fitsaboana ny fanapoizinana sôkôla?
Ny fitsaboana izay heverin'ilay mpitsabo biby dia miankina amin'ny fanjakana ahatongavan'ny saka ao amin'ny tobim-pahasalamana sy ny soritr'aretina ananany rehefa tonga tany amin'ny tobim-pahasalamana ny biby.
Raha tena azo antoka fa sôkôla no nohaninao, ny zavatra voalohany hataon'izy ireo ao amin'ny foibe fiompiana dia ny famporisihana mandoa sy manao lavage amin'ny vavony. Ary avy eo homena saribao mihetsika afangaro amin'ny rano amin'ny alàlan'ny syringe ianao.
Amin'ny tranga tsy fahazoana antoka, angamba, ny zavatra voalohany atao dia ny fitiliana-x sy ny fitsapana ra.
Mba hisorohana ny tsy fahampian-drano sy hampirisihana ny famokarana ny urine dia homena fitsaboana tsiranoka ianao. Farany, homena fanafody ianao hampihenana ny fitepon'ny fo ary ny tosidra. Ary fanafody mampitony mba hampitony ny saka sy ny anticonvulsant.
Ho toy ny fepetra fanampiny, ny saka dia mety manana kateter napetraka mba hisorohana ny kafeinina tsy hiditra ao anaty tatavia.
Ary koa, raha toa ka mila hopitaly mandritra ny andro maromaro ny saka anao ary voan'ny pancreatititis, dia azo asiana fantsom-pohy jejunostomy. Amin'ity fanadihadiana ity dia tratra fa ny sarakaty dia tsy mandeha mandritra ny vanim-potoana fanarenana. Na izany aza, dia fomba fiasa miasa izay atao amin'ny alàlan'ny fandidiana sy amin'ny fanatoranana.
Ho famaranana, tazomy anaty vatomamy mihidy mafy ireo vatomamy sy sôkôla ary lavitra ny saka, satria misy ratsy kely mety hiafarany mankany amin'ny mpitsabo biby sy amin'ny voina.
Mila mijery foana isika mba hanomezana ny tsara indrindra ny sakaizantsika volony, saingy misy karazan-tsakafo maro tsy maintsy esorintsika amin'ilay lisitra. Matetika ianao vao manome Heveriko sy sakafo lena mando manokana ho an'ny felines. tFa raha te hanome azy sakafo voajanahary ianao, ankoatry ny sôkôla dia misy sakafo hafa izay tsy azonao omena azy, toy ny: taolana, tongolo, tuna am-bifotsy (raha tsy voalaza ho an'ny saka), tongolo lay.
Manantena aho fa tianao ity lahatsoratra ity ary nahasoa anao io. Ary fantatrao fa, mba hanomezana valisoa anao, dia mamporisika anao aho hividy fitsaboana manokana ho an'ny saka. Amin'izany fomba izany dia tsy hampidi-doza ny fahasalaman'ny namantsika, ary hilamina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » sakafo » Fa maninona ny saka tsy mahazo mihinana sôkôla?